केन्द्रिय समिति विस्तार गर्दै माओवादी केन्द्र : २९९ सदस्यीय बनाईने ! - Kantipath.com
केन्द्रिय समिति विस्तार गर्दै माओवादी केन्द्र : २९९ सदस्यीय बनाईने !
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि माओवादी पुनर्गठन गर्नेक्रममा २ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरी २ सय ९९ जना पुर्‍याउन लागेको हो।
नेकपाकाे ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादीबाट २ सय जना थिए। एमाले माओवादी ब्युँतिएपछि माओवादीले २ सय ९९ जना केन्द्रीय कमिटी बनाउन लागेको हो। माओवादीका २ सय केन्द्रीय सदस्य मध्ये १८ जना एमाले प्रवेश गरेकाले त्यसलाई समेत थप गरेर केन्द्रीय कमिटी थप गर्न लागेको हो। सर्वोच्च कै अर्को फैसलाले हाल बादलसहित एमाले प्रवेश गरेका व्यक्ति एमालेका पनि केन्द्रिय सदस्य छैनन् ।
प्रचण्डको साथ छाडेर मन्त्री खान गएका नेताहरु अहिले न माओवादी,न एमालेको हविगतमा छन् । यस्तै अन्योलतापूर्ण स्थितिमा रहेका दुई जना पूर्व मन्त्री अस्ति शुक्रवार बहादुर भवन छिरेर आयोगले आफूहरुलाई कुन पार्टीको रूपमा चिन्छ भन्दै सोध खोज गरेका थिए ।
टोपबहादुर र प्रभुहरुले सो शाखामा पुगेर माओवादीको बिधान,आफूहरुलाई माओवादी पार्टीबाट हटाइएको माइन्युट निर्णय,पार्टीले के आधारमा हटाइएको रहेछ सो को कारण,पार्टी छाडेपछि सोधिएको स्षष्टीकरणदेखि माओवादीले केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको छ वा छैन ? एमालेको नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो छ छैन ? सम्पूर्ण कागजात उपलव्ध गराइदिन निवेदन दर्ज गराएर फर्किएका छन् ।
माओवादी पार्टीको अवस्थाका विषयमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन जारी राखेको छ। जसमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भुसाल रहेका छन्। सबै प्रदेश र जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यको नाम सिफारिस भएमा स्थायी कमिटीमा छलफल भई केन्द्रीय कमिटीले अनमोदन गर्ने भएको हो।
माओवादीले समावेशी सहितको जुझारु नयाँ केन्द्रीय समिति बनाउन प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ थपिने १ सय १७ जना केन्द्रीय सदस्य जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यकलगायत सबै समुदायको समेटिने गरी नाम पठाउन भनिएको छ।
Previous Previous post: तस्करी र मिसिल परिवर्तनमा मुछिएको भन्दै दुई एसपीमाथि छानबिन सुरु
Next Next post: हाइड्रोपोनिक’ प्रविधिबाट तरकारी खेती र माछापालन